'डर लागे पनि मृत्युलाई ‘एसेप्ट’ गर्नैपर्छ' : डा. शंकरमान राई - सफल नेपाल
२०७७ माघ २ शुक्रबार, ०८:०५
‘डर लागे पनि मृत्युलाई ‘एसेप्ट’ गर्नैपर्छ’ : डा. शंकरमान राई
नेपालमा मात्रै होइन, प्लास्टिक सर्जरी गर्न दक्षिण अमेरिका, पेरु, इक्वेडर, बंगलादेश, भियतनाम, चीन, अफ्रिका र भारतसम्म पुग्ने प्लास्टिक सर्जन डा. शंकरमान राईसँगको सफल कुराकानीको सम्पादित अंश :
हजुरको मनपर्ने खाना केहो ?
पोसाक के मन पराउनुहुन्छ ?
यत्तिको फिट हुनुहुन्छ, फिटनेस राज के हो ?
ब्यस्तताको बीच अध्ययन कत्ति गर्नुहुन्छ ?
बेफुर्सदीले पढ्ने बानी छुट्दै गएको छ । प्रत्येक दिन बिहान आठदेखि नौ बजेसम्म विद्यार्थीलाई पढाउँछु । पढाउनलाई पढ्नैपर्यो । काठमाडौंबाहिर जाँदा त्यो समय पढेर सदुपयोग गर्छु । दर्शनशास्त्र, अनुभव-अनुभूति पढ्न जाँगर चल्छ ।
फुर्सदमा के गर्न मन पर्छ ?
खेलकुदमा कत्तिको शोख छ ?
मोबाइल कत्तिको चलाउनुहुन्छ ?
टेलिभिजन कत्तिको हेर्नुहुन्छ ?
चलचित्र कत्तिको हेर्नुहुन्छ ? मनपर्ने कलाकार कोही छन् ?
रातदिन एकनास काम गरिरहनुभएको हुन्छ , यहाँको स्वास्थ्य कस्तो छ ?
यहाँ गजब को भाषण गर्नुहुन्छ ? कहाँ सिक्नु भो ?
मद्यपान गर्नुहुन्छ ?
यहाँको संगीतमा रुचिबारे केही बताइदिनुस न ?
यहाँका भूलहरु र तिनका सम्झनाहरु हामीलाई सुनाउनुस न ?
यहाँको घर र निवास बारे पनि केही बताइदिनुस् न ?
यहाँको राशी कुन हो ?
यहाँको सौन्दर्यचेत कस्तो छ ?
यहाँको प्रेम र विवाह बारे केहि भन्नुहोस न ?
यहाँको सपना के छ र भोली कस्तो होस भन्ने चाहनुहुन्छ ?
मृत्यु वारे यहाँको धारणा के छ ?
२०७७ श्रावण २४ गते सम्पादित l २३:३८